iOS 7 Dupliate Photos na mkpokọta - Wepụ ha ugbu a!
> Resource> iOS> 2 Mfe ụzọ iji Hichapụ iOS 7 duplicated Photos
"Mgbe wụnye iOS 7 ụnyaahụ, m chọpụtara na e nwere otutu duplicates nke foto na m iPhone, ma na Igwefoto Roll na Photo Library. Otú ọ dị, m na-adịghị ihe ọ bụla e foto na oyiri na idụhe duplicates na kọmputa m mgbe niile. Olee otú ọ pụrụ ịbụ? iOS 7 duplicates foto m? Biko nyere m aka. apụghị m wepụ ha otu otu aka. "
Na nso nso, ọtụtụ ndị, bụ ndị nwere nweta nkwalite iOS 5 ma ọ bụ iOS 6 ka lates iOS 7, na-atụle ná discussions.apple.com nke iOS 7 duplicating foto na collections. Nke a abụghị a ukem ini. Mgbe upgrading ka iOS 7, na ị na o yiri nnọọ ka iji nweta ihe duplicates mgbe ị na-agbalị ka mmekọrịta na iTunes. Ọ bụrụ na iOS 7 n'ezie nwere duplicates foto gị Apple ngwaọrụ, ị nwere ike idozi nsogbu ahụ site otu n'ime ụzọ n'okpuru:
Ngwọta 1. Wepụ iOS 7 duplicated Photos Iji aka (ọ na-ewe oge na ndidi)
Ngwọta 2. Nhichapụ iOS 7 duplicated Photos na a na Desktọpụ iOS Ngwá Ọrụ (mfe na oru oma)
Nke mbụ niile, ma ọ bụrụ na iOS 7 naanị duplicated ole na ole foto gị Apple ngwaọrụ, ị nwere ike wepu ha aka. Kpatụ Photos ngwa gị iOS 7 ngwaọrụ. Na mgbe ahụ enweta Họrọ site n'elu nri ma họrọ duplicates. Mgbe a foto na-ahọrọ, e nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ego akara. Mgbe na-ahọpụta duplicates, enweta ekpofu ahịhịa na ala wepu ha.
Wepụ iOS 7 duplicated photos site na Apple ngwaọrụ dị mfe. Dị họrọ duplicates na akpali ha ka ha ekpofu ahịhịa. Ihe na-ewute bụ na ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ duplicates, ọ ga-ewe ọrụ a ogologo oge wepụ ha aka. Ihe ka njọ, mgbe ọrụ na-agbalị ka mmekọrịta na iTunes oge ọzọ, iOS 7 pụrụ oyiri photos ọzọ. Nke ahụ bụ a na ajọ gburugburu. Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ oyiri photos wepụ site na iOS 7 ngwaọrụ na-achọghị na-enweta ya ọzọ, i nwere ike ịgbalị Ngwọta 2.
Ihichapụ iOS 7 duplicated photos na a desktọọpụ iOS ngwá ọrụ nwere ike ịbụ nnọọ mfe ma odi mfe. Ọ na-enyere gị ka ihichapụ oyiri mbipụta na ogbe anya. Isiokwu a na-agwa gị otú iji Wondershare TunesGo (Mac) ka ihichapụ iOS 7 duplicated foto na Mac. Ọ bụrụ na ị na-eji a Windows PC, i nwere ike ịgbalị Wondershare TunesGo (Windows).
Download desktọọpụ iOS ngwá ọrụ iji nwere a na-agbalị!
Nzọụkwụ 1. Gbaa ndị iOS ngwá ọrụ na Mac
Download na wụnye iOS ngwá ọrụ maka Mac - Wondershare TunesGo (Mac). Mgbe wụnye, malite ya ozugbo. Anakọta gị iOS 7 ngwaọrụ Mac site na eriri USB ya abịa na. Wondershare TunesGo (Mac) ga-egosipụta gị iOS 7 ngwaọrụ na ya isi window.
Nzọụkwụ 2. Wepụ iOS 7 duplicated photos
Pịa Photos na isi window. Na ị pụrụ ịhụ gị niile Photo Library, Photo Stream, Igwefoto Roll na-depụtara na n'akụkụ aka nri. Pịa onye ọ bụla ihe na-ekpughe foto niile na nchekwa. Họrọ iOS 7 duplicated photos na pịa Hichapụ n'elu. Na ị na-enwe ike ihichapụ niile foto na a foto album site na nri ịpị ya na-ahọpụta Hichapụ.
Nke a bụ otú iji Wondershare MobileGo maka iOS (Mac) wepụ iOS 7 duplicated photos. Ọ bụ nnọọ mfe. Iji gbochie duplicated e kere oge ọzọ ị na mmekọrịta na iTunes Library, m atụ aro ka ị:
Ndabere nile foto gị iOS 7 ngwaọrụ gị Mac mgbe ihichapụ duplicates;
Wee wepụ foto niile na gị iOS 7 na ngwaọrụ ahụ;
Mmekọrịta foto gị Mac gị iOS 7 ngwaọrụ gị iTunes;
Site n'ime nke a, m mara mma n'aka, iOS 7 agakwaghị n'ịwa oyiri foto na ngwaọrụ gị ọ bụla ọzọ.
Video maka Olee otú iji Hichapụ iOS 7 duplicated Photos